Dad doonyo kaga soo qaxay Yaman oo yimid Boosaaso | BALIBUSLE.COM
« Dowlada Kenya oo sedex cisho oo baroor diiq ah maanta kabilowday dalkeeda…
Diyaaradaha Kenya oo Duqeeyay Gedo. »
Published 5. april 2015 | By Farah
(BB)Laba Doonyood oo siday dad kaso qaxay dagaalada ka socda dalka Yaman,ayaa xalay soo gaaray magaalada Bosaso ee xarunta Gobolka Bari,kuwaas oo qayb ka noqonaya dadka kaso qaxay Yaman ee soo gaaray Puntland.
Taliyaha Dekeda Bosaso Maxamed Cali Xaashi ,ayaa sheegay in dadka xalay soo gaaray Bosaso ay u badnaayeen Dumar iyo Carruur,kuwaas oo intooda badan ahaa dad Ganacsi iyo Waxbarasho u aaday Yaman,kana soo jeeda Gobolada Puntland.
‘’Dadku waxay noo sheegen in dhibaato xoogan ay Soomaalida ku haysato Yaman,dadka imanaya si dhuumasho ah ayay kuso bexeen’’Ayuu yiri Maxamed Cali Xaashi.
Taliyaha Dekeda Bosaso ayaa sheegay in dadka soo gaaray Bosaso ay kuso dhoweeyn Dawlada Puntland iyo Hay’adaha Qaramada Midoobay ee qaabilsan arrimaha Qaxootiga.
Labada Doonyood ee soo gaaray Bosaso ayaa tirada Dooyaha soo gaaray Puntland ka dhigaysa saddex,waxaana arrintan ay imanaysaa xilli Puntland ay Guddi Heer Qaran ah u saartay saamaynta ka imanaysa dagaalada ka socda Yaman.
Wasiirka Arrimaha dibada Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa horay u sheegay inaysan jirin dhibaato Soomaalida ku haysata Yaman,xilli dhibaatada Soomaalida ku haysata dalka Yaman ay isa soo tarayso marba marka ka dambaysa,ayna jiraan Qaxooti kuso Qulqulaya Puntland.
Soomaaliya ayaa qayb ka ah Dawladaha taageersan Isbahaysiga Sucuudiga ee wada dagaalka ka dhan ah Xuutiyiinta Yaman,xilli Dawladaha dagaalka wada ay dadkooda kaso daadgureeyen Yaman.
Si kastaba aha ahate,ma jiro wax xil ah oo Dawlada Muqdisho ay iska saartay Soomaalida ku nool dalka Yaman.